लिभरपुलले एभर्टनको चुनौति पार गर्ला ? | Hamro Khelkud
लिभरपुलले एभर्टनको चुनौति पार गर्ला ?
सोमबार, पुस ४, २०७३
लिभरपुल (एजेन्सी)– लिभरपुलसँग प्रिमियर लिगमा पुनः दोस्रो स्थानमा उक्लने मौका छ । नेपाली समय अनुसार मंगलबार बिहान पौने २ बजे लिभरपुल र एभर्टनबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । आर्सनलाई सोमबार २–१ हराउँदै म्यानचेस्टर सिटी दोस्रो स्थानमा उक्लेपछि लिभरपुल तेस्रो स्थानमा झरेको थियो ।
एभर्टनलाई हराउन सकेन लिभरपुल फेरी सिटीलाई पछि पार्दै माथि उक्लनेछ । सिटीको ३६ अंक छ भने लिभरपुलको ३४ अंक छ । समान ३४ अंक भएपनि गोलअन्तरमा आर्सनल चौथो स्थानमा छ । शीर्षस्थानको चेल्सीको ४३ अंक छ । एभर्टनलाई हराउन सके लिभरपुल र चेल्सीबीचको अंक अन्तर पुनः ६ अंकको हुनेछ । नवौं स्थानमा रहेको एभर्टनको २३ अंक छ ।
प्रिमियर लिगमा लिभरपुलसँगका पछिल्ला पाँच मध्ये ४ पटक एभर्टनले अन्तिम पाँच मिनेटमा गोल फर्काएको थियो, जसले खेलको नतिजामा प्रभाव पारेको छ । एभर्टनका रोमेलु लुकाकु र लिभरपुलका एडम लालाना फर्ममा रहेका खेलाडी हुन् । ९ गोल गरेका लुकाकुले ३ गोलमा असिस्ट गरेका छन् । ६ गोल गरिसकेका लालानाले त्यत्तिनै गोलमा असिस्ट गरेका छन् । एभर्टनसँगका पछिल्ला डर्बी खेलमा लिभरपुल अविजित रहँदै आएको थियो । एभर्टनसँगका पछिल्ला ५ लिग खेलमध्ये ४ वटामा डानियल स्टुरेजले गोल गरेका थिए ।
लिभरपुलका प्रशिक्षक योर्गन क्लोपले आफु पहिलो पटक गुडिसन पार्क जान लागेकोले खेल आफ्ना लागि विशेष रहेको बताएका छन् । डर्बी खेल समर्थकका लागि सधै उत्साहजनक रहने उल्लेख गर्दै एभर्टनका प्रशिक्षक रोनाल्ड कोएम्यानले भने, ‘हामीलाई थाहा छ समर्थकलाई खुसी पार्न र टोलीमाथि गर्व गर्न जित हाम्रा लागि कति आवश्यक छ भन्ने । ’